Wararka Maanta: Axad, Apr 29, 2012-Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka oo munaasibad mahadcelin ah u sameeyey dowladda Turkiga iyo Mas’uuliyiin Turkiga ka socday oo ka qeyb-galay.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka oo munaasibad mahadcelin ah u sameeyey dowladda Turkiga iyo Mas’uuliyiin Turkiga ka socday oo ka qeyb-galay. Minneapolis, MN (USA)Axad, Abriil 29, 2012 (HOL) - Munaasibadaan, oo ahayd mid aad u balaaran oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qeyb-galay boqolaal Soomaali ah oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee gobolka Minnesota oo ah halka Soomaalida ugu badan ee wadanka Mareykanku ay ku dhaqan yihiin, iyadoo sidoo kalena ay munaasibada Soomaalida kala soo qeyb-galeen mas’uuliyiin ka socotay dowladda Turkiga gaar ahaanna safiir ku xigeenka safaarada Turkigu ku leeyahay wadanka Mareykanka Mr: Timur Soylemez.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Munaasibada ayaa waxaa ka hadlay dad aad u tiro badan oo isugu jira aqoonyahano, waxgarad, haween iyo waliba cuqaal, waxaaana dhammaantood ay si isku mid ah dowladda Turkiga kaga mahaceliyeen gurmadkii ay Soomaaliya ka geysatay xiligii ay macaluushu ku dhufatay iyo waliba dadaalada horumarineed ay wali dowladda Turkigu ka wada gudaha Soomaaliya.
Xaashi Shaafi, oo madax ka ah urur u dooda xaquuqda dadka Soomaalida gobolka, islamarkaasna uu ururkiisu munaasibadaan soo abaabulay, ayaa ujeeda munaasibada ku sheegay in ay dowladda Turkiga tusaan sida ay Soomaalidu u aragto waxqabadka ay ka hayso gudaha Soomaaliya iyo waliba gargaarkii ay gaysatay xiligii macaluushu ku dhufatay Soomaaliya.
“Ujeedadeenu waxaa ay ahayd in aan muujino in aan nahay kuma abaal leh oo og wixii loo sameeyey, islamarkaasna aan ka mahadcelino wixii naloo qabtay, sidoo kalena aan raali ka nahay waxaa ay dowladda Turkigu ka sameynayso gudaha wadankeeni Soomaaliya, halka aan mahadcelintaasi marin karno waxaa ahayd safaarada oo dowladda mashatasha, waana taasi sababta aan safiir ku xigeenka halkaan Minnesota ugu casuunay,” ayuu yiri Xaashi Shaafi.
Sidoo kale, waxaaa ka mid ahaa dadkii munaasibadaan ka hadlay Sh. Xassan Jaamici oo ka mid aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota, kaasi oo sharaxay bilowga iyo waqtiga soo jireenka ah ee xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya waliba Turkiga, isagoo sidoo kalana goobtaasi ka aqriyey gabi ka turjumaya waxqabadka dowladda Turkiga ee Soomaaliya waliba sida ay dadka Soomaaliyeed ugu riyaaqeen. Safiir ku xigeenka safaarada Turkiga Mr Tumer Soylemes, oo gabagabadii munaasibada ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dibada uga mahadceliyey soo dhaweynta balaaran ee ay kala kulmeen iyo waliba sidii ay ugu oogalaadeen in ay gudaha Soomaaliya tagaan islamarkaasna ay howlo ka fuliyeen.
“Waxaan idiin sheegayaa Dowladda Turkigu marnaba raali kama noqoneyso in ay Soomaaliya sii ahaato qaran guul-daraystay oo maxbuus u ah macaluul iyo colaad, waxaanse doonaynaa in ay Soomaaliya noqoto qaran buuxa lugihiisa ku istaaga,” ayuu yiri Timur Soylemez, oo intaasi ku daray in Soomaalida looga fadhiyo in ay ka shaqeeyaan xal u helida wadankooda.
“Ma jirto cid kale oo dhibtiina xalinaysa, hase ahaatee idinka ayaa la idin kaga baahan yahay xalka in aad gacmihiina ku keentaan, oo aad ka shaqeysaan nabadeynta iyo dib u dhiska wadankiina, waana taasi midda anaga na dhiiragalinaysa, idinkana idin farxad galinaysa,” ayuu yiri safiir ku xiigeenka dowladda Turkiga ee Mareykanka u fadhiya.
Gabagabadii munaasibada ayaa qaar ka mid ah ururada ka shaqeeya gargaarka ee ay Soomaalidu leedahay gobolka Minnesota iyo waliba dhalinyaro, waxaa ay safiir ku xigeenka Turkiga gudoonsiiyeen hadyado kala duwan oo qaarkood ay ahaayeen muuqaalo iyo astaamo lagu muujinayey midnimada Soomaaliya iyo Turkiga.
Maxamed Faarax Talyaani, Hiiraan Onlinemtalyaani@hiiraan.comMinneapolis,Minnesota
Daahfurka madasha Rajo oo lagu qabtay magaalada Nairobi (SAWIRRO) 4/29/2012 10:17 AM EST